China Rolll To Roll Calendar Heat Press Machine fekitari uye bhizimisi | Asiaprint
Tambanudza kumonera sublimation kupisa muchina muchina.Iyo huru roller yemuchina uyu ndeye chaiyo yakatwasuka yekupedzisa kugadzirisa, uchienzaniswa neyechinyakare yakatwasuka kupedzisa, inogona kudzikisa pasi simba, kuitira kuti roller isiri nyore deformation uye zvirinani chengetedza mwero nemuchina wese.
1.Injereta Inobata Screen Screen: Yakanyatso kudzora tembiricha uye nguva.Iyo humanization dhizaini uye nyore kushandisa.
2. Dhinda yekumanikidza: Pressure inogadziriswa uye kumanikidza kwekuchinjisa kunogona kunyatso kudzorwa.
3. Otomatiki Kuchekesa: Otomatiki gumbeze rinopinda system kuchengetedza gumbeze richimhanya munzira kwayo yekurudyi.
4. Chinyorwa Kuparadzanisa Chikamu: Nemaoko akaparadzanisa gumbeze kubva kudhiramu kana simba rakatemwa, wedzera chengetedzo.
5. Rack DriveR: Deredza fume mukati mechassis: hutsi hushoma, hunogara uye hwakagadzikana.
6. Roll Jira Bhasiketi: isa jira, chengetedza nzvimbo uye nyore.
7. Mhepo Inodzora Shaft: Ita shuwa kuti jira uye bepa zvifambise zvakanaka.
8. Kuisa Chishandiso Chishandiso: Zviri nyore kuisa zvimwe zvekushandisa zvekushandisa.
Zita Rekushandisa Asiaprint
Kudhinda / Kupeta Hupamhi 2m
Roller dhayamita 600mm
Imwe Voltage Tsika voltage nemhando yako chaiyo odha
Rated goho 50KW
Speed 180m / h
Kurongedza Saizi 302 * 181 * 170cm
Kudyisa Maitiro Kudya kwepamusoro
Humwe Hukuru Inowanikwa
Mhepo Compressor Inodikanwa Zvinodiwa
Gumbeze Chinyorwa Yakanyanya Kupisa Kuramba
Dhiramu Pamusoro Chrome: Kuomarara kwakanyanya uye kuita kwenyonganiso
Drum Oiri 100%
Kupisa Range 0-399 ℃
Makuriro Ekutumira Roller kupisa kupisa muchina, Simba tambo isina ipulagi, zvimwe zvemagetsi zvikamu zvemahara
Tarira Saizi yemhando neyako yakakosha odha
Yakasarudzika muchina kushanda neakasiyana magetsi mutengesi
1) Anopfuura makore 19+ ruzivo.
2) Wepamusoro mhando epamba zvigadzirwa.
3) Yakakwira mhando yekugadzira boka, yakakwana mhando yekudzora system.
4) Yakasarudzika dhizaini yekugona.
5) Kurumidza kuendesa zuva, izere ne-mushure-kutengesa sevhisi.
Pashure: 3.2m Calandra Roller Heat Press Machine
Zvadaro: Dhijitari Collar Hot Fusing Press Machine
Dhijitari Swing Kure Kaviri Worktale T-shati Kupisa ...
Mini Inotakurika T-shati Vinyl Heat Kutamisa Muchina
Yakakura Rudzi rweJersey Double Worktable Heat Press ...